Shir wadatashi ah oo ku saabsan qabyo qoraalka siyaasadda maareynta deegaanka soomaaliya oo ka furmay Muqdisho. – Radio Muqdisho
Raadinta xal loo dhanyahay oo ku wajahan dhibaatooyinka deegaanka Soomaaliya ayeey aheyd muhiimada ugu weyn ee kulankan wadatashiga ah oo ku saabsanaa qabyo qoraalka siyaasadda maareynta deegaanka Soomaaliya, waxaana soo qaban qaabiyey Agaasinka Bey’adda ee xafiiska Ra’iisul wasaaraha, waxaana ka qeyb galay Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, Wasiiro, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, aqoonyahano iyo marti sharaf kale.
Axmed Yuusuf Axmed Agaasimaha Guud ee Bay’adda ee Xafiiska Ra’ii sul wasaaraha Soomaaliya Ayaa ugu horeyn sheegay in ay aad muhiim u tahay siyaasadda maareynta deegaanka Soomaaliya, oo uu tilmaamay inay ka shaqeenayeyn in muddo ah isla markaana ay la kaashadeen qubaro kala duwan .
Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Wasiirka Xanaanada Xoolaha iyo Wasiir ku xigeenka Beeraha XFS Ayaa sheegay inay soo dhaweenayaan Siyaasaddan oo muhiim u ah Wasaaradahooda isla markaana ay diyaar u yihiin inay fikradahooda ku darsadaan si loo meel mariyo.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo shirka furay ayaa tilmaamay inuu deegaanku leeyahay muhiimadda gaara loona baahanyahay in la wada ilaalsado si dalka looga badbaadiyo qataraha laga dhaxlo.
Siyaasadda maareynta deegaanka Soomaaliya oo ay in muddo ah ka shaqeenayeyn Agaasinka Bii’adda ee Xafiiska Ra’ii sul wasaaraha ayaa soo martay dhowr waji waxeyna hada mareysa heer gabo gabo ah, iyadoo la filayo in goor dhow loo gudbiyo Xildhibaanada labada Gole si ay u meel mariyaan.
Ra’iisul Wasaare Khayre "Mucaarad Iyo Muxaafid, Waxaan Taariikhda Ku Geli Doonnaa Sida Aan u Ilaalinno Qarannimada, Madax Bannaaninada, Midnimada, Iyo Xuduudaha Dalka"